Mobilada iyo Xooggaaga Iibinta ee Gaarka ah | Martech Zone
Talaado, September 25, 2012 Isniintii, September 24, 2012 Adam Yar
Haddii aad leedahay xoog iibsi xoog leh oo ka baxa, fursadaha ayaa ah inay leeyihiin waxqabad la'aan weyn oo ku saabsan habka iibka. Qaar badan oo ka mid ah maamulayaasha iibka dibedda waxay helayaan kooxahooda safraya, qabanaya oo riixaya macluumaad ka badan inta ay iibinayaan. Abaabulka xooggaaga iibku wuxuu qaadanayaa macno cusub maalmahan.
U fidinta kooxdaada barnaamijyada moobiilka ama kaniiniga ee u oggolaanaya iyaga inay soo ururiyaan xogta, helitaanka macluumaadka, iyo xitaa soo jeediyaan (iyadoo la adeegsanayo qalab weyn sida kafaala-qaadeena, TinderBox) oo aad ku xirto qandaraas hal meel kaliya ma aha oo kaliya inay howsha ka dhigeyso mid hufan, waxay awood siineysaa kooxdaada iibka inay xirto heshiisyo badan… dhaqso.
Laga soo bilaabo Isweydaarsiga Moobilka Muusigga ah, a Iibinta Supercharged: Sidee ayey kooxaha iibka hogaaminaya u wadaan kobaca dakhliga xilligii PC-ga kadib? Iyada oo loo marayo xalalka waxtarka iibinta moobiilka. Qalabkani ma aha oo kaliya fududaynta iyo hagaajinta habka iibka ee kooxaha iibka, waxay ku kala duwan yihiin khibrada iibsashada ee macaamiisha, furitaanka awoodda Analytics waaxaha suuqgeynta, iyo saameynta ururka oo dhan.
Tags: apps mobileiibinta mobiladakarti iibinta mobiladaKordhinta Iibkaqalabka iibkabarnaamijyada kiniiniga ah
Adam Small waa agaasimaha guud ee AgentSauce, Muuqaal buuxa, istiraatiijiyad suuq geyn guryaha oo otomaatig ah oo lagu dhajiyay boostada tooska ah, emaylka, SMS, barnaamijyada moobiilka, warbaahinta bulshada, CRM, iyo MLS.